Puerto Rico na Virgin Islands, bibiri kpamkpam mgbe njem nke Ajọ Ifufe Maria | Netwọk Mgbasa Ozi
A ga-echeta Hurricane Maria dị ka otu n'ime oge kachasị emebi n'oge afọ a. Mgbe Irma gachara, ihe kacha mma ga-abụ bụ na ajọ ifufe ọzọ ebilite, ebe ọ bụ na mbibi ọ kpataara ya jọgburu onwe ya. Ma, ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, enweghi ike ịchịkwa ihe ịtụnanya igwe.
Ya mere, ebili mmiri nke ebe okpomọkụ nwere ike ịbawanye ike, ihe ha na-enwewanye ike ịme ngwa ngwa n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri na-abawanye. Ya mere, Maria di nwute, enwewo ike ịnọgide na-ebute ọtụtụ nsogbu n'àgwàetiti nke Oké Osimiri Caribbean, karịsịa na Puerto Rico na Virgin Islands.
1 Mmebi na Puerto Rico
2 Mmebi na Virgin Islands
3 Ebee ka ị na-aga ugbu a?
Mmebi na Puerto Rico
Foto - Hector Retamal / AFP
Ajọ Ifufe Maria mebiri na Puerto Rico. Foto - Carlos García / Reuters
Ajọ ifufe Maria, nke dị na mgbago ụsọ ugwu ugwu Dominican Republic, emebila oke. Site na ikuku nke kilomita 250 kwa elekere, ọ na-ebupụta ihe ọ bụla n'ụzọ ya. Ihe ọghọm a dị nnukwu nke na, dị ka onye isi obodo nke obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Catañi, "ọ ga-ewe ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ ọnwa tupu anyị agbakee na nke a."
Ihe onyonyo na vidiyo ndị sitere na ya dị egwu: osisi ndị a tọpụrụ, ụlọ bibiri, mbuze, okporo ámá ndị jupụtara na irighiri ihe… Yesterdaynyaahụ, Tọzdee, Septemba 21, àgwàetiti ahụ nọgidere na-eche nche maka idei mmiri.
Mmebi na Virgin Islands
Obodo Virgin Islands nke United States emeghị nke ọma. María hapụrụ ndị bi na ya ọkụ eletrik, okporo ụzọ ndị ahụ agabigakwa. A na-eme atụmatụ na ihe ruru 70% nke ụlọ ndị dị na Santa Cruz, obodo nke mmadụ 55.000 bi, nwere mbibi.
Bothkèala abụọ ahụ, ma Puerto Rico na Virgin Islands, E kwupụtara mpaghara ọdachi site na White House. Ajọ ifufe ahụ egbuola ma ọ dịkarịa ala mmadụ 34, 15 nwụrụ na Puerto Rico, 15 na Dominica, atọ na Haiti na otu na Guadeloupe.
Ebee ka ị na-aga ugbu a?
Ifufe nke Maria, ugbu a bụ ụdị ajọ ifufe nke atọ, Ha nwere ike iti Bahamas n'ehihie a. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iwusi ike na ụbọchị ndị na-abịanụ, o yighị ka ọ ga-emetụ ụsọ United States.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Puerto Rico na Virgin Islands, bibiri kpamkpam mgbe oke ifufe Maria gasịrị
Achọpụtara ihe ọhụụ na ihe pụrụ iche na sistemụ Igwe